Wax ka ogoow sharciyadda cusub ee dhaqan-galaya sanadka cusub ee 2018-ka | Somaliska
Wax ka ogoow sharciyadda cusub ee dhaqan-galaya sanadka cusub ee 2018-ka
Sanadkan cusub ee 2018-ka, waxaa dowladda dalka Iswiidhan ay soo saartay sharciyo la filayo ineey dhaqan galaan xilliyo kala duwan oo sanadkan ah. Haddaba waxaa shabakadda Somaliska.com siddii caadada aheyd waxeey idiin soo gudbineeysa sharciyadaasi cusub oo ka kooban dhowr iyo tobban qidib sharciyeed oo maantaba qaarkood dhaqan galay, muhiimna ay tahay in la fuliyo lana dhowro.
Ciqaabta dadka sida sharci darrada ah u wata hubbka oo laga dhigay labbo sanno oo xariga ah.
In ciqaab la marsiinayo ciddii ku xad gudubta muuqaalada iyo sawirada sida gaarka loo leeyahay siina faafisa iyadoo qofka lugu wax yeeleeynayo.
In aad sameeyso waxyaalo soo jiidanaya dhalaanka tusaale sida inaad la kulantid iwm, iyadoo galma laga rabo. Falkan ciddii sameeysa waxaa la marsiinaya ciqaab adag.
Ganaax culus oo la dul dhigi doona ciddii qamriga si qarsoodi ah dalka ku soo gelisa, Waxaa ciddii lugu qabto bixin doontaa 40% canshuur dheeri ah.
Waxaa darwaliinta ka mamnuuc ah in iyagoo gacanta ku haya taleefoonada ku hadlaan islamarkaasna baabuur wadaan. (Sharcigan wuxuu dhaqan galayaa bisha 2aad)
Waxaa qasab ah in kolka ilmuhu buuxiyo 6 sanno uu bilaabayo Förskoleklass (oo ah rowdada lugu sii hayo ka hor intaanu fasalka 1aad u gudbin. Wuxuu dhaqan galayaa sanad dugsiyeedka qaboobaha ee 2018-ka.
Sharuudo xagga adeega ah oo la duldhigay goobaha ay booqdaan dadka lixaadka la’a sida maqaaydaha iyo jimajaraha. Taasi macnaheedu waa in dadkan ay helaan adeegyaddii ay u baahnaayeen iyaggoo aan lugu faquuqin lixaadkooda oo kala dhiman. Bisha 5aad ayuu dhaqan galaya sharcigan.
Goobaha la isku kululeeyo ee Solarium-ka ama baastuga loo yaqaan ay dhalinyarada tagi karaan kolka ay gaaraan da’da 18 jir. Bisha 9aad ayuu dhaqan galayaa sharcigan.
Maamulka degmooyinka oo mas’uul looga dhigay ineey gacana siiyaan kuwa sida waalida ah qamaarka u ciyaara ee u baahan gacan qabashada.
In la dhowro xogta ammaanka howlwadeenadda sida sawiradooda, xirriiradooda ee ku keeydsan barnaamijyada kombiyuutarada dowladda
In misna la dhowro xogta shaqsiyaadka adeegsada kombiyuutaradda makatabaha dalka.
Qareenadda gala dembi ka baxsan xilliyadda shaqada in laga saari karo ama laga tuuri karro urruradda qareenadda.
Ugu dambeyntii maamulayaasha iskuuladda oo go’aan ka gaari kara haddii lugu soo casuumayo iskuuladooda tusaale ahaan haddii ay yihiin xisbiyo ama xildhibaano iyo maamulka degmooyinka.
Sharciyadan waa kuwo ay isku raaceen xildhibaanada gollaha shacabka ee baarlamaanka oo ay fadhiyaan asxaab siyaasadeed oo kala duwan. Waxaana la filayaa in qaarkood ay xilliyo kala duwan dhaqan geli doonaan.